Puntland iyo Jubbaland oo ka qeyb-galaya shirka Dhuusamareeb 3 | Keydmedia
Puntland iyo Jubbaland oo ka qeyb-galaya shirka Dhuusamareeb 3
Wafdi hor u dhaca ah oo ka socdo Puntland ayaa saacadaha socdo tegaya Dhuusamareeb sida aan xogta ku helnay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu qanciyay ka qeyb-galka shirka wada-tashiga Dhuusamareeb 3 kadib cadaadis xooggan oo kaga imaaday dhinaca wakiilada Beesha Caalamka u joogo Soomaaliya.
Ilo wareedyo ayaa Keydmedia Online u xaqiijiyay in wafdi ka socdo maamulka Puntland uu saacadaha soo socdo gaari doono Dhuusamareeb, kaas oo hur u dhaca u ah safarka Madaxweyne Saciid C/llaahi Deni ku tegaya magaaladaas.
Wafdiga waxaa hor kacaya xubnaha maamulka Puntland ku metela guddiga ka baaraan-degidda arrimaha doorashooyinka, kuwaas oo aan shirarka guddiga farsamo ee dhawaan la magacaabay aanan soo xaadirin, kadib is fahamwaagii soo kala dhex galay dowladda Federaalka iyo Puntland & Jubbaland oo isku dhinac ah.
Saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa sidoo kale xaqiijiyay in madaxweynaha maamulkaas uu Dhuusamareeb tegi doono maalinta berito ah ama horaanta todobaadka soo socdo, kana qeyb geli doono shirka Dhuusamareeb uga socdo madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada.
Dhinaca kale xogta ay Keydmedia Online heshay ayaa sheegeyso in Madaxweynaha Jubbaland oo hadda safar dibadda ah ku maqan uu dhawan ku laaban doono Kismaayo, islamarkaana u sii gudbi doono magaalada Dhuusamreeb si uu uga qeyb-galo gogosha wada-tashi ee halkaas taalo.
Madaxda Jubbaland iyo Puntland ayaa ka qeyb-galka shirka Dhuusamareeb ku xiray shuruudo ay ka mid yihiin in meesha ay ka maqantahay xukuumaddii fulin laheyd heshiisyada lagu gaaro shirka haseyeeshee caadiiska Beesha Caalamka uga yimid lagu qanciyay in ay gaaraan Dhuusamareeb.
Magaalada Dhuusamreeb waxaa muddo todobaad ku dhow ku sugan madaxweynaaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeele, Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.